Abavelisi nabaNikezeli beeMaski ze-N95 - iFektri yaseChina - iQuanzhou waimaoniu yokuNgenisa nokuThengisa ngaphandle, Co, Ltd.
Ikhaya > Iimveliso > Imaski > Isigqubuthelo se-n95
Imaski yeN95 yenye yeemaski ezisibhozo zokukhusela eziqinisekiswe yi-NIOSH (iZiko leSizwe loKhuseleko eMsebenzini kunye neMpilo). Imaski yeN95 ayisiyo igama elithile lemveliso. Logama idibana nomgangatho weN95 kwaye idlulise uphononongo lwe-NIOSH, inokubizwa ngokuba yi-N95 mask. Imaski engu-N95 inokusetyenziselwa amasuntswana enobubanzi be-aerodynamic ye-0.24 ± 0,6 Î¼m (ubukhulu bendawo eyi-0.075 Î¼m ± 0.020 Î¼m). Ukusebenza kokufayilisha kufikelela ngaphezu kwe-95%.
I-N95 imaski igama langaphandle: I-mask eyi-N95 yobuso
I-N95 I-Mask Certification body: NIOSH
Udidi lweemaski ezingama-N95: imaski ekhuselayo
Ukwahlula-hlulwa kweemaski ze-N95: Imaski yeNdebe engu-N95, ukusongelwa kwemaski eyi-N95
Umsebenzi we-N95 imaski: ukusebenza ngokufezekisiweyo kwamasuntswana anobubanzi be-aerodynamic ye-0.075µm ± 0.020±m ifikelela ngaphezu kwe-95%
Imaski engu-N95 inefilitha esebenza kakuhle kune-95% yeesenti ezinobubanzi be-aerodynamic ye-0,075µm ± 0.02µm. Ububanzi be-aerodynamic yeebacteria zomoya kunye ne-fungus spores ikakhulu zahluka phakathi kwe-0.7- 10µm, kwaye ikwoluhlu lokukhusela lweemaski ezingama-N95. Ke ngoko, iimaski ezingama-N95 zingasetyenziselwa ukhuseleko lokuphefumla lwezinto ezithile, njengothuli olwenziwe ngexesha lokugaya, ukucoca kunye nokulungiswa kwezimbiwa, umgubo kunye nezinye izinto. Ikwalungele ulwelo okanye amanzi angengawo ooyilo obangelwe kukutshiza. Amasuntswana egesi ayingozi. Inokucoca ngokufanelekileyo kwaye icoce ivumba elingaxutywanga ngaphakathi (ngaphandle kwegesi enetyhefu), ukunceda ukunciphisa inqanaba lokuvezwa kweenkcukacha ezithile ezinokuchaphazeleka (ezinjengokubumba, i-anthrax, isifo sephepha, njlnjl.), Kodwa akunakuphelisa usulelo loqhakamshelwano, ukugula okanye ingozi yokufa.
Isebe lezabasebenzi laseMelika licebisile ukuba abasebenzi bezonyango basebenzise iimaski ezingama-N95 ukunqanda izifo ezingena emoyeni ezinesifo esifana nomkhuhlane nesifo sephepha.
I-NIOSH eqinisekiswe ngamanye amanqanaba okulwa ne-anti-genetic mask nayo ibandakanya: I-N95, N99, N100, R95, R99, R100, P95, P99, P100, iyonke iindidi ezili-9. La manqanaba okhuselo anokufikelela kuluhlu lokhuseleko lwe-N95.
"N" athetha ukungavakali kwioyile, elungele amasuntswana angenawo oli.
"R" kuthetha ukungahambelani neoyile, kulungele ioyile okanye ioyile engasasebenziyo. Ukuba isetyenziselwe ukukhusela amasuntswana anamafutha, ixesha lokusebenzisa akufuneki lidlule kwiiyure ezingama-8.
"P" kuthetha ubungqina beoyile, elungele i-oyile okanye ioyile engeyiyo ioyile. Ukuba isetyenziselwe amasuntswana eoyile, ixesha lokusebenzisa kufuneka lilandele iingcebiso zomenzi.
"95", "99" kunye no "100" zibhekisa kwinqanaba lokufezekisa ngokufanelekileyo xa livavanywa ngamasuntswana emi-0,3. "95" kuthetha ukuba ukusebenza ngokufayilwayo kungaphezulu kwe-95%, "99" kuthetha ukuba ukusebenza ngokufayilwayo kungaphezulu kwe-99%, kwaye "100" kuthetha ukuba ukusebenza ngokufayilwayo kungaphezulu kwe-99.7%.
Ukongeza ekucoceni ukusebenza kakuhle kwemaski eyi-N95, ukusondela kwemaski ebusweni yenye yezinto ezibalulekileyo ezenza ukuba imaski isebenze kakuhle. Iindidi ezahlukeneyo zeemaski zinomahluko omkhulu ngokufaneleka kwazo kubuso bomntu. Ke ngoko, ngaphambi kokusebenzisa imaski, ukufaneleka kwemaski kufuneka kuhlolwe kuqala. Ngexesha lovavanyo oluqinileyo lobuso bonxibileyo, qinisekisa ukuba umoya ungangena ngaphakathi nangaphandle kwimaski xa ikufuphi nomda wobuso.
Iifayile ezishisayo: I-N95 Mask, abaVelisi, abaThengi, iiVenkile eziNinzi, iiFektha, Thenga, China, ezenziwe eTshayina, amaxabiso, uLuhlu lwamaxabiso, I-Quotation, CE, FDA
Isigqubuthelo se-n95I-NIOSH imaskiNks Mask wezonyangoImask ekhuselayoImaski yobhubhani weN95I-N95 imaski ye-antivirusImaski yobuso yeN95I-NIOSH yobuso bemaskiImaski ye-3D ye-N95
Ikotoni Yarn Mask